> Resource > Talooyin > Wedding Album: Sida loo sameeyo Custom Digital Wedding Album
Ka dib qiyaastii sannad ah qorshaynta xafladaha aroosyada, ka qayb-qaadashada dhawaaqay in diraya lagu marti aroos, doorashada dharka arooska inay tababarasho arooska, arooska ah uu dhamaado faraxsan oo faraxsanahay dhowr saacadood oo kaliya. Daqiiqad kasta oo ka dhigaysa ilaa xusuus aad qiimo, iyo album arooska cajiib ah ayaa kaa caawin kara in nafo la kuwan. Oo halkan waxaad ku baran doonaa sida loo sameeyo si fudud laakiin hal-abuur album arooska faahfaahsan ah. Nuqdada muhiimka ah ee shaqadan waa male.
Waxaa jira noocyo ka mid ah albums arooska: Online Wedding Album, Wedding DVD Album, iyo Wedding video album. Oo raac hoose si aad u aragto sida ay u abuuraan noocyada kala duwan ee album arooska:
Qeybta 1: Sida loo sameeyo Wedding ah online Album
Qeybta 2: Sida loo sameeyo video Wedding ah, DVD Album
Haddii aad rabto inaad la wadaagto aad arooska photos online, doorashada ugu fiican waa in album sawir aroos ee Flash qaab, oo waxaa la ciyaari kara ku dhowaad websites oo dhan iyada oo aan ku rakibidda software kasta, iyo gaaro dheelitir fiicani ka dhex tayada iyo baaxadda file. Flash Gallery Factory Deluxe waxaa internetka ah kii sameeyey u fududahay in la isticmaalo album sawir bixinta noocyada kala duwan ee 2D breathtaking ama arrimo 3D.
Dooro album template sawir aroos ah
Dejinta arooska photos in gaare heestii
Aad iyo aad u badan website Save ama u wargeeyaan on YouTube,
Abuuray Flash Gallery Factory Deluxe
Samaynta filim la arooska photos Waa fikrad fiican si ay u muujiyaan farxad ka dib xaflad aroos ah aad. DVD Slideshow Builder Deluxe halkan waxaa loo isticmaalaa si album video arooska ama DVD arooska album la sawiro, videos iyo heeso, dariiqyo cusub.
The gaare album Wedding abaabulan karo sawiro aad galay cutubyada kala duwan, sida diyaarinta arooska, maalinta arooska, xafladda arooska, soo dhoweynta, Malabka, iwm Iyada oo ay gacanta ku fog, waxaad dib uga soo noqon karaan si ay daqiiqad kasta maalinta gaarka ah shaashadda weyn, jeclaan dhacaya shalay. Wixii arooska DVD album, waxaa la soo jeediyay in aad ku darto horyaal oo sharaxaad si ay u sheegaan sheeko arooska funny ama taabashada. Waa kuwan sida:
Darsada sawirada arooska iyo videos.
Shakhsiyeeyo aad album sawir arooska, tusaale ahaan, ku dar aad song jecel sida music asalka, dalban saamaynta qaar ka mid ah si ay sawiro aad, ku qor fariin u sawir kasta, ama sheeko arooska codkaaga u gaar ah iyo wixii la mid ah.
Save the album video arooska ama gubi in album DVD arooska, tayo sare leh.